सीसीटीभीमा नेपाली सन्देश - China Radio International
(GMT+08:00) 2018-08-14 14:41:55
चिनियाँ केन्द्रीय टेलिभिजन सीसीटीभीको सजिसजाउ स्टुडियो। एकैचोटि करोडौँ दर्शकले हेर्ने प्रतियोगितात्मक सांगीतिक कार्यक्रम। एकजना युवा हातमा माइक बोकेर चिनियाँ गीत गाउँदै स्टुडियोमा प्रवेश गर्छन्। ताइवानी गायक फेइ युछिङले गाएको गीत ती युवा दुरुस्तै गाउँछन्। मूल्याङ्कनको कुर्सीमा बसेका निर्णायकहरु आपसमा भन्छन् 'स्वर त काटिकुटी स्वाउकको जस्तै।' फेइ युछिङ चीनमा स्वाउकको नामले चिनिन्छन्।
प्रतियोगितामा सहभागी ती युवाको पोशाक र अनुहार देखेर निर्णायकले प्रश्न गर्छन् 'तिमी त चिनियाँ जस्तो छैनौ। तिम्रो पोशाक पनि निकै अनौठो छ। तर तिमीले गाएको गीत चाहिँ सक्कली गायकको भन्दा केही पनि फरक छैन। तिमी कहाँका हौ?' ती युवाले मुसुक्क हाँसेर जवाफ दिन्छन् 'म नेपाली हुँ। म अहिले शाङहाइमा पढ्दैछु।'
नेपाली भनेपछि फेरि निर्णायकहरु मुखामुख गर्छन् र केही खासखुस गर्छन्। सुरुमा उनीहरु नेपालको नाम सुनेर अलमलिएको जस्तो लाग्छ। सायद उनीहरुका लागि नेपाल त्यति प्रचलित नाम थिएन। केही बेरमा उनीहरुमध्ये महिला मूल्याङ्कनकर्ताले भन्छिन् 'नेपाल! हाम्रो तिब्बतपारिपटि्टको हिमालय देश। जस्तो टल्किने हिमाल उस्तै तिम्रो हाँसो।' मंचमा हाँसोको फोहोरा छुट्छ। त्यसपछि मूल्याङ्कनकर्ताहरुले इन्सर्टमा सक्कली गायकको गायन भिडियो हेर्दै ती युवाले गाएको गीतको तुलना गर्छन् र फेरि दङ्ग पर्दै भन्छन् 'हाउभाउदेखि स्वर कस्तो ठ्याक्कै मिलेको!'
दौरासुरुवाल र ढाका टोपीमा चिनियाँ टेलिभिजनमा गीत गाएर चीनमा चर्चा बटुल्ने ती युवा हुन् भक्तपुरका सन्देश देउजा। उनी अहिले शाङहार्इमा चिनियाँ भाषा मूल विषय लिएर स्नातक गर्दैछन्। सामान्य गितार बनाउने उनले कहिल्यै पनि सांगीतिक कक्षा लिएका छैनन्। उनी आफूलार्इ नेपालमा बाथरुम सिङ्गर रहेको बताउँछन्। शाङहार्इ पढ्न आएपछि उनी चिनियाँ गीत गुनगुनाउन थाले। भिडियो हेरेर त्यस्तै गाउन नक्कल गर्न थाले। फलस्वरुप अहिले उनी ३० भन्दा बढी चिनियाँ गीत गाउन सक्छन्। उनले ती गीतहरु कण्ठ पनि गरेका छन्। उनलार्इ गीत गाउँदा शब्द हेरिरहन पर्दैन। उनी प्राय फेइ युछिङकै गीत गाउँछन्।
उनी शाङहार्इमा आएर पढ्न थालेको तीन वर्ष भयो। शाङहार्इमा पढ्न थालेको एक वर्षपछि उनले कलेजले आयोजना गरेको कार्यक्रममा चिनियाँ गीत गाए। उनलार्इ सुरुमा गाउन सक्छु जस्तै लागेको थिएन। तर त्यही गीतले उनको नयाँ यात्रा सुरु भयो। त्यसपछि उनलार्इ शाङहार्इकै स्थानीय टेलिभिजनले बोलाएर स्टुडियोमा गीत गाउन लगायो। त्यो पनि नयाँ वर्षको विशेष कार्यक्रममा। त्यसपछि बेइजिङमा रहेको सीसीटीभीले उनलार्इ तीनपटक गीत गाउनका लागि बोलाइसक्यो। चिनियाँ गीत गाउने क्रममा उनले समस्त चिनियाँहरुसँग प्रतिस्पर्धा गरेर उत्कृष्ट स्थान लिइसकेका छन्।
सन्देश ताइवानी गायक फेइ युछिङका दुर्इ दर्जनभन्दा बढी गीतहरु जस्ताकोतस्तै गाउन सक्छन्। फेइले महिला गायिका तङ ली चुनसँग युगल गायन पनि गरेका छन्। अहिले तङ ली चुनको मृत्यु भइसकेको छ। सन्देशले त्यो युगल गीत पनि सीसीटीभीमा गाएका छन्। सन्देशसँग तङ ली चुनको स्वरमा प्रख्यात चिनियाँ गायिका थोङ याओले साथ दिएकी छन्।
उनी शाङहार्इमा पढ्न आएको तीन वर्ष भयो। पहिलो एक वर्ष उनी छात्राबासमा बसेर पढे। दोस्रो वर्ष एकजना चिनियाँसँग कोठा गरेर बाहिर बसे। छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरिरहेका उनी छात्राबासमा निशुल्क बस्न पाउँथे। 'मलार्इ चिनियाँ संस्कृति, समाज र रहनसहनलार्इ नजिकैबाट नियाल्न मन लाग्यो। त्यही भएर म चिनियाँ साथीसँग डेरामा बस्न थालेँ' उनी भन्छन् 'त्यसपछि त साँच्चै नै मैले धेरै कुरा सिक्ने मौका पनि पाएँ।' नेपालीलार्इ भात नभइ नहुने अनि चिनियाँले प्राय भात नखाने। चिनियाँसँग एउटै कोठामा बस्न पक्कै पनि सजिलो थिएन। उनको चिनियाँ साथी बेलुका अबेलासम्म काम गर्दथ्यो। सन्देश बिहान सबेरै कलेज जान्थे। खाना खाने बेलामा उनीहरुको भेट चाहिँ साप्ताहिक बिदाको दिन मात्र हुन्थ्यो। बेलुका सन्देशले टन्न नेपाली खाना बनाउँथे र आफू खाएर फ्रिजमा राख्थे। उनले भोलिपल्ट बिहानका लागि पनि अघिल्लै दिन पुग्ने खाना बनाएका हुन्थे। चिनियाँ साथी राति आएर खाना खान्थ्यो। बिहान सन्देश कलेज गएपछि उनको चिनियाँ साथी उठेर फ्रिजमा रहेको नेपाली खाना खाएर काममा जान्थ्यो। कलेजबाट आएर सन्देश खाना खान्थे। दिनभर साइकलमा शाङहार्इको चक्कर लगाउँथे र साँझमा फेरि नेपाली खाना बनाउँथे।
यो दैनिकले चिनियाँ साथीमा अचम्मको प्रभाव पर्यो। उसले चिनियाँ खानाभन्दा नेपाली खाना मन पराउन थाल्यो। त्यसपछि त उनीहरुको कोठामा सधैँ नेपाली खाना नै पाक्न थाल्यो। तर उनीहरु एक वर्षमात्र सँगै बसे। एक वर्षपछि सन्देशको चिनियाँ साथीले बिहे गर्यो। अनि सन्देश फेरि छात्राबासमा फर्किए। सन्देश छात्राबासमा फर्किए पनि उनीहरु बीचको मित्रता कायम रह्यो। गत फेब्रुअरी महिनामा परेको चिनियाँ नयाँ वर्षमा ती साथीले सन्देशलार्इ आफ्नो घर हनानमा लिएर गए। त्यहाँ उनी एक हप्ता बसे। हनानमा पनि ती चिनियाँ साथीले उनलार्इ नेपाली खाना बनाउन लगाए। सन्देशले नेपाली खाना बनाएर पूरै चिनियाँ परिवारलार्इ खुवाए। टेलिभिजनहरु च्यानलहरुमा सीसीटीभी संसारमा सबैभन्दा धेरै दर्शकले हेर्नेमा पर्दछ। चीनभित्र र प्रवासी चिनियाँले सीसीटीभी हेर्ने गर्दछन्। एकैचोटि करोडौँले हेर्ने कार्यक्रममा उनले नेपालको प्रचारप्रसार गरेका छन्। अहिले पनि वीच्याट, क्यूक्यू, विइपो, युखो लगायत विभिन्न चिनियाँ माइक्रो ब्लग र सामाजिक संजालहरुमा सन्देशले गाएको चिनियाँ गीतका भिडियो भेटिन्छन्। उनका त्यस्ता भिडियो थुप्रै व्यक्तिले हेरेका छन् र सेयर गरेका छन्।
सन्देशले चिनियाँ टेलिभिजनमा चिनियाँ गीतसँगै केही नेपाली गीत पनि गाएका छन्। मधुरो र लामो स्वर तानेर चिनियाँ गीत गाएपछि मन्चमा आशिन निर्णायकले उनलार्इ नेपाली गीत गाउन अनुरोध गरे। जब सन्देशले 'छातीमा मेरो यो छोटो भोटो कमरमा खुर्पेटो' गीत गाए तब उनीहरु थप आश्चर्यमा परे। यो नेपाली गीत निकै तीब्र गति र उच्च स्वरमा गाउनु पर्दथ्यो। पहिले सन्देशले प्रस्तुत गरेको चिनियाँ गीतसँग न लय मिल्थ्यो न त कुनै सुर ताल नै। एउटै व्यक्तिमा यस्तो विपरीत क्षमता देखेर चिनियाँहरु आश्चर्यकित भएको सुनाउँछन्। यद्यपि उनी व्यावसायिक गायक भने होइनन्। सीसीटीभीको स्टुडियोमा उपस्थित हुँदा सन्देश सधैँ नेपाली टोपी लगाउँछन् र नेपालको बारेमा केही जानकारी पनि दिन्छन्। आफ्नो नाम जस्तै चिनियाँ गीतसँगै नेपाली सन्देश छर्ने काम गर्छन् सन्देश देउजा।
साभारः कान्तिपुर कोसेली २०७५ साउन २६ (२०१८ अगष्ट ११) शनिबार।